Movies Best soo bandhigtay Tareenadu | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Movies Best soo bandhigtay Tareenadu
Waxa aad u dhiirrin doona in ka badan safar tareen ah daawashada Movies xiiso bandhigtay Tareenadu? Eeg liiska Movies fiican soo bandhigtay Tareenadu our, oo na tweet at @saveatrain oo noo sheeg kuwa aad ku aragtay iyo haddii aad u jeclaa sida ugu badan ee aynu ku samaynay.
On top of our qaado si Movies soo bandhigtay Tareenadu waa – Harry Potter Movies 1 si ay u 8 (2001-2011)
Iyada oo ku saleysan taxane caanka ah ee buugaag by J.K. Rowling, kuwaas oo siddeed Movies soo bandhigtay Tareenadu sawir khiyaali ah oo ku saabsan sixir ah saaxir dhallinyarada, Harry Potter. Waxa uu u barto wuxuu leeyahay awood sixir ah iyo dhigto Hogwarts School of Sixirka iyo Wizardry, halkaas oo uu ka muquurtay badan caqabado ka buuxsamay nolol cusub, howlno, oo badisay.
Laakiin halka ay samayn tareenada u iman? Maalintii koowaad ee dugsiga Harry ee, waxa uu leeyahay si ay u koraan Hogwarts Express, tareen yaal madal 9 ⅓. Waa kaliya la heli karo by socda – soomi- xagga derbiga leben dhexeeya dhufto ee ka 9 iyo 10. Marka saarnaa tareenka, uu la kulmo Ron Weasley iyo Hermione Granger, kuwaas oo kor u soo afjaro isagoo saaxiibadiis nolosha-dheer.
Oo dhan ee filimada ka, ka tareen Hogwarts Express sii wadaan in ay calaamad u bilowgii iyo dhammaadka sannad dugsiyeed kasta iyo bixisaa shiraac ah qaar ka mid ah quruxsan cajiib ah story-khadadka. Gaar ahaan markii in Harry iyo Ron seegay tareenka oo lahaa Daqsi gaariga la sixray dugsiga!
Hubi in aad kala soo bixi ugu yaraan mid ka mid ah Movies soo bandhigtay Tareenadu si aad u phone ama kiniin ka hor inta aadan ballan aad soo socda safarka tareenka.
Paris illaa London tareennada
Brussels ilaa London tareennada
Qoraal uu wadaagay Sinefil (@ city.of.cinema)
Sool iyo taabashada, qaado this of, Movies soo bandhigtay Tareenadu, leeyahay dhamaan calaamadaha of-agaasimaha qoraa ay, Wes Anderson. Ka dib markii ay aabe oo la kulmay dhimashada shil, saddex walaalo safri guud ahaan India tareen ee isku day ah in ay ku xidhmaan.
Ciyaaray by Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman, walaalkiis kasta waxaa la il daran caabuqa, iyo wax badan oo ka mid ah magaalada Khartuum iyo dagaal dhaco. Laakiin dabcan, isagoo movie Wes Anderson – waxaa jira qalloocinaya badan oo qosol iyo markooda. Mid walaalo ah ayaa ka tagay uur leh xaaskiisa guriga iyo mid kale ayaa ka soocan saaxiibtiis iyo wuxuu helayaa jacayl mid ka mid ah shaqaalaha tareenka.
Waxa kale oo jira mas laalaaday, aaska a, meditation iyo ... iyo sidoo kale, waxaan mar dambe ma siin doonaa. U oggolow qadiimigaani qadiimiga ah inuu kugu dhiirrigeliyo inaad dalbato taada tareenka u quudhin.
Nuremberg ilaa Berlin tareennada
Aachen ilaa Berlin tareennada
Hamburg ilaa Berlin tareennada
Dilkii on Orient Express (2017)
Qoraal uu wadaagay Steve (@grushkov)
Iyada oo ku saleysan sheeko caan Agatha Christie, this remake oo casri ah ayaa la shubay xiddiga-daray oo ay ku jiraan Doontii Juudi waxaana Dench, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Johnny depp, iyo Willem Dafoe. Kenneth Branagh waa doorka hogaanka of Hercule Poirot, oo isna sidoo kale si toos ah filimka iyo tani waa qayb ka mid ah Movies noo soo bandhigtay Tareenadu.
Marka laga reebo ka sal-dhigida iyo milicsi qaar ka mid ah, storyline oo dhan waxaa loo dhigay on a tareen raaxo. looxyada Poirot Orient Express inuu qaato fasax dheer u qalantay. Baarka raaxada-fasalka koowaad iyo gaariga cuntada, wuxuu la kulmayaa koox rakaab ah oo umuuqata inaysan xiriir la lahayn. Mid ka mid ah iyaga ka mid ah ayaa sheegay in uu noloshiisa halis iyo isku dayo inay qortaan Poirot – Baare ah xurmayn – inaan ceshano ammaan.
Waxa uu diido, oo rakaab ah oo dhan sariirta aado. Subixii xigay, rakaabka la helay la dilay. Si aad wax dheeraad ah la yaab leh, derails tareen ee ka baraf. Poirot loo soo iibiyo si ay u xalliyaan dambiyada ka hor tareenka waa ka soo kabanaya iyo booliska ogaatay dilka.
In si qurxan loo sheegay, qarsoodiga riwaayado baxday, Sheekada oo u muuqanayo sida waraysiyada Poirot qof walba oo rakaab iyo in mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa si qarsoodi ah uu ogaado oo dhan ma aha sida waxa ay u muuqataa.
Tani waa ka mid ah waa-arki, Movies soo bandhigtay Tareenadu, kaliya ma ahan, silsilad ah cajiib iyo jilitaanka fasalka-koowaad, laakiin sidoo kale muuqaal qurux badan iyo aragtida tareen laftiisa.
Brussels illaa Amsterdam tareennada
London ilaa Amsterdam tareennada
Bonn illaa Amsterdam tareennada
Paris illaa Amsterdam tareennada
Engine The Little Taasi karin (2011)
Haddii aad qabto adventurers yar safraya aad la, aad iyaga faraxsan safarka la film kid-friendly this. Qisada classic carruurta yimaado nolosha movie dhererka buuxa la tuuro ka star-ka ku wajahdo a. Tirada deynta bixinta ciyaaray waxaa ka mid ah Jamie Lee Curtis iyo Whoopi Goldberg.
movie ayaa daba socda Engine ka Little – tareen toy ah – oo dhan adventures iyada rajada, sida ula falgalo characters kale tareenka iyo alaabta. Waxaa jira, silsilad ah isku midka ah ee dunida dhabta ah, halkaas oo furmi waa Wiil yar oo lagu magacaabo Richard. Si kastaba ha ahaatee, labadan Caalamka isku marka Richard ilaa uu dhammaado gudaha rajada. Hortiisa waxaa sababa dhibaatooyin, so he needs to go back. Adventure and hijinks ensue while he and the toys try to get him back into the real world.
Maxay tahay habka ugu fiican ee lagu dhiirrigeliyo Filimada Muujinta Tareennada si ay ugu safraan tareennada!
London ilaa Paris tareenada
Marseille ilaa Paris tareennada
Ready in ay qoraan Movies adiga kuu gaar ah soo bandhigtay story Tareenadu la xiriira? Booqasho www.saveatrain.com iyo hesho tigidhada tareenka ugu jaban ee aad u quudhin soo socda tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-movies-featuring-trains%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#HarryPotter trainmovies talooyin tareenka